Hlaziya i-Android 2.0.1 ukuya kwi-2.1 kwiMotoroli Ebalulekileyo | I-Androidsis
Ndizithatha ezi ndaba ukuzazisa kwiwebhu njengomhleli omtsha. Emva kokukhangela isiqwenga seendaba esifanelekileyo kwintetho yam ixesha elide, ndikhethe enye, ubukhulu becala, abanini Isiseko seMotorola.
Ndiza kuwe Android 2.1 ifakwe kwi-ROM yesiNgesi yaseJamani nase-Hong Kong. Ngolu hlaziyo uya kuba sele usebenzisa iiPhephadonga eziBukhoma zeNexus.
KUFUNEKA UFIKELELO LWENGQIQO (ukuba awukwazi ukuba ungayenza njani cinezela apha)
- I-Android 2.1 yegalari yeendaba nge Multi-Touch
-Ukuphucula umdlali weendaba
-Yenza iMultitouch ngeminwe emi-3 (andikayiboni)
Iidesika ezi-5 endaweni yesi-3
-Jonga iidesika ezi-5 kwisitayile esinyulu seWindows7
Njengoko ingenguye uhlaziyo olusemthethweni, inokuba ineebugs, ndiye ndaqaphela ukuba ngoku iwijethi yemozulu ayikho kwaye imicro yebar yeGoogle ibonakalisiwe kwiorenji.
Ngaphandle koko kuyamangalisa.
Xa ufaka olu hlaziyo, ubeka umngcipheko othile wokubangela isitena, ndincoma ukuba ubuyisele kwakhona kwaye ube ne-nandroid backup. Yenza umngcipheko wakho.
Unokuzikhuphelela ifayile eyimfuneko apha.
KUBALULEKILE PHAMBI KOKUFAKA:
1º Sula ngokupheleleyo (Buyisela kumzi mveliso)
2nd Faka olu Hlaziyo
Ingcambu yesithathu kwakhona
Kufuneka kuqatshelwe ukuba le mod khange yenziwe ndim. Sityala yonke kwialldroid.org
Eminye yemifanekiso yathunyelwa kwi-alldroid.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » [Mod] Hlaziya i-Android 2.0.1 ukuya kwi-2.1 kwiMotoroli ebalulekileyo
Ngaba umntu othile wakuzama eArgentina? Ukwazi ukuba yonke into iyasebenza
Ixesha lendawo sitsho
Nantsi ithi isuka ku-2.0.1 ... Ngaba ingenziwa ukusuka ku-2.0? Ndiyazikhuthaza ukuba ndiyenze ngaphandle komdlalo, kodwa kufuneka ndazi ukuba inokwenziwa na kwi-2.0
Ungabuyela ku-2.0 xa kukho into engahambanga kakuhle, njani?
Kodwa ngaba lo msebenzi uyasebenza?
Okanye ngaba kungenxa ye-droid kuphela?
ikhonkco kwintambo ye-alldroid nayo iya kuthakazelelwa, enkosi.
Molweni, ninjani nonke apha (ndicinga njalo) ukusuka kwinqanaba, ndingathanda ukukubuza
1º xa une-wifi edityanisiweyo kwaye bakubize kukungabikho kolawulo lokuphazamiseka
2º ukukhanya okanye isivamvo sakufutshane ibekwe kakubi kakhulu kwi iminxeba
iyanqamula kwaye ngendlebe yakho usebenzisa isandisi-lizwi sokubamba umnxeba njl.
Ndingazithanda iimpendulo kukuba iqala ukundikhathaza kakhulu
Ukukhathazeka ndiza kuyithengisa nge-fuck, kodwa andicingi ukuba ndiyacwangcisa
Uxolo ngokuhlaziya kuhlobo 2.0.1
ngokubhekisele kumagqabantshintshi angaphambili
Uxolo, ndivele ndakhanyisa ibakala lam nefayile megaupload oyinike apha. Ndicinga ukuba kufuneka kubekho uhlobo lokudideka. Kuba iMilestone yam yahlala nohlobo lwe-2.0.1 nakwiGERMAN. Nicomda… ndicela undixelele ukuba unayo ifayile engeyiyo xa uyilayisha !! Ndifuna i-2.1 yam !!
Ifayile ekhutshelwe kumthwalo omkhulu ... ibuza iphasiwedi.
Eyiphi? Imibuliso kunye nemibulelo!
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ilantino America iyasebenza?
1.- Ngaba imalunga neMilestone yaseBrazil okanye inguqulelo yaseYurophu?
2.- Ngaba i-3G isebenza ngokuchanekileyo?
Ngaba ngesiNgesi okanye ingatshintshwa ngeSpanish?
Kuphela kwimbalasane ngoku
Ndicinga ukuba isebenza kuzo zombini i-South American kunye ne-European version. kodwa kuphela IMBALASANE. Kudala ndimfumana nenye impazamo. Umzekelo. Iphulukana nolunye usetyenziso oluvela kumzi-mveliso ke ndicebisa ngamandla ukuba ndenze isipele nge-nandroid. Ukuba umntu akazi ukuba enze njani, ndiza kuthumela isifundo kuyo yonke loo mva kwemini.
UGabriel, i-3g isebenza ngokugqibeleleyo. Malunga nesiNgesi, iipesenti ezingama-90 zitshintshela kwiSpanish ngaphandle kwezinye izicelo ezinje ngemiyalezo.
Emva kokuhlaziya, xa iqala kwakhona, ihlala imisiwe kwi-M ye-motorola, sele inje kangangemizuzu engama-20, sele ndizamile ukususa ibhetri kwaye ndayiqala kwakhona, kunye nokusula ngokupheleleyo.
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kwenzeke ntoni kwaye uyisombulula njani?
Tincho, kufanele ukuba ibeyodwa, yeyiphi inguqulelo, yeyaseYurophu okanye yaseMzantsi Melika? Ngaba uyenzile isipele se-nandroid ngaphezulu njengesilumkiso? Ukuba kunjalo, kuya kufuneka uyibuyisele, ndithumele nje isifundo sendlela yokwenza.
ngelishwa khange ndenze yogcino, luguqulelo lwase Mzantsi Melika.
Ingxaki kukuba andikwazi ukufikelela kwi-sd, kuba iyabambeka kwi-motorola M kwaye i-USB ayizukundichola:
Ngaba unayo nayiphi na ingcamango endinokuyenza?
uff .. inyani kukuba ibonakala imbi. Yeyiphi ingxelo onayo ene-2.0 okanye i-2.0.1 Ndithi xk uhlaziyo kuphela lwe-2.0.1 njengoko kubonisiwe ekuqaleni kweposi
Mka! Khange ndiyifunde le nxalenye, kuyabonakala ukuba undithumele zonke ii-shits kunye, bendine 2.0
Ngoku, awazi ukuba ndingafikelela njani kwi-sd ukusuka kwindawo ephambili? kuba ukuba kunjalo, ndingakhangela i-rom yobuqu ndayihlaziya okanye enye into
Ngaba unokucinga ngento endinokuyenza? Ndilangazelela, ngaphezulu kwayo yonke into andifumani nto kuGoogle
Tincho, ndiphawula kancinci ngetyala lam apha. Inguqulelo yoMzantsi Melika. Kwimeko yam ndinengcambu kwaye ndonyuselwa kwi-2.0.1 nge-RDSLite ukusuka kwesi sifundo silandelayo: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=de&tl=en&u=http://www.nodch.de/motorola-milestone-update-2-0-1-mit-root-installieren/1648/comment-page-1&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhi_aUF1en3N2ByGEp1Y2UdlzbmDIw#comment-20666
Iguqulelwe esiNgesini kuba isicatshulwa santlandlolo siseJamani. Khanyisa iMilestone yam (linda ukuba iqalise kwakhona amaxesha ama-2). Emva koko ndakhetha ukulayisha ifayile eposwe apha kwaye andizange nditshintshe. Ndiyaqhubeka no-2.0.1 kwaye uthini ukuba uhlala eArgentina uyacaphukisa kakhulu .. okoko ukwamkelwa komqondiso kuyehla kakhulu ngokucacileyo ezinye i-freq ezisetyenziswa apha naphaya hayi .. Ndifunde into phaya kodwa emva kwexesha heh. UNicomda khange aqaphele naluphi na utshintsho phakathi kweefayile ezimbini ze-SBF ... ukusuka kwikhonkco oligqithisele kule ndiyikhuphelileyo apha. Kwaye kwifowuni ihlala isithi 2.0.1.
Ukuba uyayenza le nkqubo yeTincho, ubuyisa umlinganiso wakho nge-2.0.1. Kwimeko yam eyenzeka kum xa ndifuna ukubuyela kwisiphatho sam esingu-2.0 esenziwe nge-nandroid. Ukuba umntu uyazi indlela yokukuthothula phantsi ndingangaphezulu kombulelo. okoko ngenguqulo 2.0.1 ngokuqinisekileyo andinayo ifowuni.
UNicomda ukuba unokwenza uqeqesho ndingaluxabisa kodwa ungangqina ukuba ubona inguqulelo 2.1? Molweni nonke.
Isifundo se-nandroid sele sithunyelwe. Kwisiphelo sam ukuba itshintshile yaya ku-2.1 kuba le mifanekiso ingentla ivela kwi-motorola yam ukuba ukuba ndiyakuqinisekisa, mhlawumbi kukho ukungangqinelani kunye ne-South American rom.
Kodwa ndiyacacisa ukuba le ayisiyiyo i-rom esemthethweni ye-2.1, kodwa imodyuli kwi-2.0.1 evuselela amaphepha aphilayo kunye nolunye uphuculo lomdibaniso.
I-Tincho kufuneka isebenzele indlela ye-watts, izame
ngalo mzuzu ndiyayivavanya, sele ndingenile kwi-bootloader kwaye ndilinde i-rom 201 yokukhuphela ...
Nje ukuba ndigqibe inkqubo yokuthumela kwenzeke ntoni!
kwangaphambili, enkosi kakhulu!
Akukho nto, silapha ukunceda!
Ewe, ekugqibeleni ndiyisebenzisile kunye nohlaziyo olusuka apha! Ndenze yonke into abandixelele yona kwaye isebenza kakuhle.
Ingxaki ekuphela kwayo endinayo kukuba i-3g ayindiphakamisi kwaye ngoku, ngalo lonke ixesha ikufuphi nesithethi yenza ingxolo eyoyikisayo yokuhambisa, ebingazange iyenze ngaphambili, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kutheni kwaye uyisombulula njani?
i-watts, unayo nayiphi na indawo yogcino lwe-2.0 yeArgentina yaseArgentina? Ungayidlulisela kum ukuba unayo?
imeyile yam yile crespi.martin@gmail.com
Ndicinga ukuba kwakucacile ukubandakanya emzimbeni weendaba ukuba yiMOD esekwe kwi-2.0.1 hayi i-2.1 uqobo, into ebalulekileyo ...
I-xD ibikhona ... ndizakuyihlela
Molo, ifayile yeMegaUpload inegama eligqithisiweyo. Ithini iphasiwedi?
Yintoni i-rar pass.
yintoni ipasi? Kwaye enye into .. Ndiyifakile ver 2.0.1 .. ukufaka 2.1 Ndiyenza ngendlela endenze ngayo ukufaka i-2.0.1?
usebenzisa i-RSD lite?
thengisa iifowuni sitsho
Ndithengise iselfowuni yam kwi-zonzoo kwaye ndenza imali entle.
Phendula ngokuthengisa iiselfowuni
Molo, ndiyabona ukuba bendiphantse ndadlula kwiminyaka eyi-6 kodwa ndinento ebalulekileyo nje. Ndifuna ukuvuselela ku-Android 2.1 kodwa ikhonkco lokukhuphela uhlaziyo alisafumaneki. Ngaba umntu uza kuba nayo? Enkosi!